Bixinta Top Banggood - usbuuc ee Sebtember 24 ilaa 30, 2018 | Androidsis
Sideen ku ogaan karnaa inaad ku jeceshahay tikniyoolajiyadda qiimo wanaagsan, mid ka mid ah dukaamada ugu wanaagsan ee qiimaha, tayada iyo dammaanadda waa shaki la’aan Banggood, waana isla sababtaa in laga bilaabo bishan July 2017 iyo wixii hadda ka dambeeya bil kasta, aan kuu soo wadno ugu fiican Banggood wuxuu bixiyaa toddobaadle la cusbooneysiiyaa.
Markaa bil kasta waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho daabacaadda qoraalkan Top waxay bixisaa Banggood, oo la cusbooneysiin doono toddobaadle si loogu daro dalabyada ugu xiisaha badan ee isla usbuucaas aan ka heli karno dukaanka internetka ee caanka ah ee asal ahaan Shiinaha oo leh qiime fadeexo ah. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kula talinno soo dejiso oo rakib barnaamijka rasmiga ah ee Banggood tan iyo intii laga soo maray, marka lagu daro helitaanka a 10% dhimis dheeraad ahWaxaad sidoo kale fursad uheli doontaa qofkasta kahor intaanad helin waxqabadyo gaar ah iyo nambarro qiimo dhimis ah oo kaliya laga heli karo APP Sidoo kale ha ilaawin taas, haddii aad tahay isticmaale Telegram, waxaan leenahay kanaal gorgortan iyo dalabyo ah taas oo aan ka mid nahay tikniyoolajiyada ugu xiisaha badan ee aan ka soo aruurinno dukaamada internetka ee kala duwan.
1 Bixinta laga bilaabo usbuuca Sebtember 24 ilaa 30
1.1 Qiimo-dhimista qalabka BlitzWolf
2 Bixinta laga bilaabo usbuuca Sebtember 17 ilaa 22
2.1 LeEco Le2 X526 waxaa lagu qiimeeyay $ 99,99 todobaadkan
3 Bixinta laga bilaabo usbuuca Sebtember 3 ilaa 9
3.1 UMIDIGI Mid kaliya 146,16 euro
3.2 UMIDIGI One Pro kaliya 171,95 euro
3.3 Elephone S7 oo leh qiimo dhimis ah 25% qiimo ah 94,57 euro
3.4 LEAGOO S9 oo leh qiimo dhimis 18% ah qiimo dhan 120,36 euro
3.5 DOOGEE MIX 2 oo leh qiimo dhimis 33% ah qiimahiisu yahay 171,95 euro
3.6 Nubia M2 Lite oo leh 31% qiimo dhimis ah qiimaha 91,13 euro
Bixinta laga bilaabo usbuuca Sebtember 24 ilaa 30
Qiimo-dhimista qalabka BlitzWolf
Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee lagu yaqaan qaybaha iyo qaybaha isku xirayaasha. Thanks to Banggood, waxaan ka helnaa taxane ballaaran oo dallacsiin ah badeecadooda. Fiilooyinka USB, adapters-ka, baytariyada dibedda ama xeedho ayaa ka mid ah alaabooyinka in shirkaddu naga tagto dalacsiintan. Marka haddii aad mid raadineysay, kani waa waqtiga ugu fiican ee loogu talagalay.
Dalacsiintu waa kuwa kala duwan. Sicir-dhimista illaa 70%, badeecooyin bilaash ah oo loogu talagalay iibsashada 2 ama in ka badan BlitzWolf badeecooyin ama qiimo dhimis lagu iibsado dhowr alaab. Xayeysiin aad u dhameystiran, ayaa la heli karaa todobaadkan. Ha u oggolaan inay baxsato!
Bixinta laga bilaabo usbuuca Sebtember 17 ilaa 22
LeEco Le2 X526 waxaa lagu qiimeeyay $ 99,99 todobaadkan
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee Aasiya ayaa nooga tegaya qaabkeeda cusub qiimaha ugu fiican. Waxay leedahay shaashad 5,5-inji ah, iyo gudaha gudaheeda ayaa na sugaya processor Qualcomm Snapdragon 652, mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran bartamaha kala duwan ee nooca Shiinaha. Waxay leedahay 3 GB RAM iyo 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Kaamirada dambe waa 16 MP kan horena waa 8 MP. Waxaan taleefanka ku leenahay aaladda sawirka faraha, sidoo kalena waxay u taagan tahay inay si dhakhso leh u soo rogto.
Telefoonka waa la heli karaa ku dhiirrigelinta Banggood qiimo dhan 99 doolar. Waxaa lagu heli karaa hal toddobaad qiimahaas weyn.
Bixinta laga bilaabo usbuuca Sebtember 3 ilaa 9
UMIDIGI Mid kaliya 146,16 euro
Toddobaadkan dhexdiisa, ka mid ah waxyaabaha Banggood bixiyo waa inaan muujino UMIDIGI One, oo ah terminaal leh shaashad 5,99-inch ah oo leh HD + xallinta iyo saamiga dhinaca 19: 9. Gudaha, waxaan ka helnaa Processor Helio P23 oo ka socda MediaTek oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah.
Si ka duwan terminaalka kale ee Aasiya, qaabkani waa waxaa laga heli karaa Android 8.1, wax mararka qaar adag in laga helo noocyada soo saarayaasha. Kaamirada hore waxay gaareysaa 16 mpx, halka nidaamka kamarada gadaal ka kooban yahay 12 mpx lens iyo 5 mpx lens, oo aan ku qaadan karno sawirro aad u fiican.
UMIDIGI One Pro kaliya 171,95 euro
UMIDIGI One Pro, oo ah nooc sidoo kale la soo bandhigo waqti xaddidan, ayaa si ficil ahaan ah noo siiya isla qaababka aan ka heli karno nooca One, oo leh 5,99-inch HD + shaashadda xallinta, Android 8.1, processor MediaTek Helio P23 iyo 4 GB oo RAM ah. Farqiga ugu weyn, waxaan ka helnaa meesha lagu keydiyo, a booska oo kordhiya ilaa 64 GB, halkii laga siin lahaa 32 GB oo uu bixiyay nooca One. Labada noocba waxay noo ogolaanayaan inaan balaarino meesha keydka ah ilaa 256 GB iyadoo la adeegsanayo kaararka microSD.
Elephone S7 oo leh qiimo dhimis ah 25% qiimo ah 94,57 euro
Waxaan ku bilaabaynaa dalabyadan mid ka mid ah moodooyinka ugu muhiimsan ee astaanta Shiinaha. Waxay leedahay a Shaashad 5,5-inji ah waxayna isticmaashaa Helio X25 ka processor ahaan. Sida RAM, waxay leedahay mid 4 GB ah waxayna leedahay 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah. Waxay leedahay hal kamarad 13 MP gadaal ah. Moodelkani wuxuu u taagan yahay inuu yeesho dareeraha faraha isku dhafan xagga hore.
Banggood ayaa noo keenaya qaabkan a qiimaha 94,57 yuuro kor u qaadida. Waxay qaadataa a 25% dhimis Ha u ogolaan inay baxsato!
LEAGOO S9 oo leh qiimo dhimis 18% ah qiimo dhan 120,36 euro
LEAGOO waa summad goobeysa nusqaan ka jirta suuqa Yurub, iyadoo ay ugu wacan tahay moodellada kan oo kale ah. Wuxuu leeyahay a Shaashad 5,85-inji ah oo HD + xalkeedu dhan yahay, taas oo shaki la’aan wey weyn tahay in la arki karo dhammaan noocyada ku jira. Ka processor ahaan waxay doorteen MTK6750, oo ay wehliyaan 4 GB RAM iyo 32 GB oo keyd gudaha ah. Taleefanka ayaa u muuqda naqshadiisa, iyadoo shaashadda laga helayo shaashadda. Naqshad wanaagsan, oo leh naqshad weyn.
Banggood wuxuu noo keenayaa qaabkan qiimo ah 120,36 euros kor u qaadida. Waxay ku lug leedahay qiimo dhimis ah 18% qiimaha asalka ah.
DOOGEE MIX 2 oo leh qiimo dhimis 33% ah qiimahiisu yahay 171,95 euro
Summad kale oo suuqa ku sii socota waa DOOGEE. Telefoonkani wuxuu leeyahay shaashad dhan 5,99 inji. Waxay leedahay Helio P25 oo ah processor, oo ay weheliso 6 GB oo RAM ah iyo keyd gudaha ah oo 64 GB ah. Moodelkani wuxuu u muuqdaa inuu haysto batari weyn oo ah 4.060 Mah Mah, taas oo runtii siisa madax-bannaani badan dadka isticmaala. Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu caansan waxaan kaheleynaa furitaanka aqoonsi wajiga iyo kamarad gadaal laba-gees ah.
Banggood, waxaan ka helnay telefoonka a qiimaha 171,95 yuuro kor u qaadida. A weyn 33% sicir-dhimis marka loo eego qiimihiisii ​​asalka ahaa.
Nubia M2 Lite oo leh 31% qiimo dhimis ah qiimaha 91,13 euro
Nubia M2 Lite ficil ahaan waa isku mid, laakiin dhexdeeda kama heli doonno kamaradda laba-laabka ah ee Nubia M2
Nubia waa mid ka mid ah noocyadaas dad badani ogyihiin oo in muddo ah suuqa ku jireen. Waxay nooga tagayaan xul ballaaran oo moodello ah dhammaan noocyada kala duwan. Mid ka mid ah moodelladoodu waa tan 'M2 Lite'. Telefoonku wuxuu leeyahay shaashad 5,5-inji ah. Ka processor ahaan wuxuu adeegsadaa MTK6750, oo ay weheliso 3 GB RAM iyo 64 GB oo keyd gudaha ah. Kaamirada gadaal waa 16 MP iyo kan hore 13 MP, si aan u qaadan karno sawirro wanaagsan.
Banggood ayaa noo keenaya qaabkan a qiimaha 91,13 yuuro kor u qaadida. Sicir-dhimis 31% ah marka loo eego qiimihiisii ​​hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Bixinta Top Banggood - usbuuc ee Sebtember 24 illaa 30, 2018
Waxaas oo dhan waxaa lagu qeexay bogga iibka Banggood, sidoo kale caadi ahaan haddii ay tahay shixnad Spain loo dirayo oo maraakiibta caadiga ah la codsado, taasoo qaadata qiyaastii bil ah amarkaaga inuu yimaado, iyagu kaaama qaadayaan kharashka rarka ama kharashyada kastamka inta badan kiisaska.
Haddii aad ku weydiisato adeegga Express, waxaa badanaa keena DHL ka dibna haddii aadan ka takhalusin kharashyada kastamka. Tusaale ahaan, waxaan codsaday Mi A1 si deg deg ah si ay u fuliyaan dib u eegista fiidiyowga sida ugu dhakhsaha badan waxayna igu soo oogeen ilaa 35 Euro kharashyada kastamka.
90 $ Waxaan u arkaa inay tahay wax xad dhaaf ah taasna maahan wax Banggood ah haddii aysan ahayn canshuuraha u gaarka ah ee waddankaagu kugu soo rogo.
Salaan sxb !!!